Ndị ọkàiwu ezumike nka na Netherlands - Law & More | Eindhoven
Iwu ezumike nka na Netherlands abụrụla mpaghara nke aka ya. Ọ gụnyere iwu na ụkpụrụ ezumike nka niile na-enye ego nnochite anya ndị ọrụ mgbe ezumike nka. Ihe Nlereanya gụnyere iwu a kapịrị ọnụ dịka Iwu ezumike nka, mmanye mmanye na Industry Pension Fund 2000 Act ma ọ bụ Equalization nke ikike ezumike nka na mmemme nke alụkwaghịm. Iwu a metụtara, n’ihe ndị ọzọ, ọnọdụ ndị a ga-ezute iji tozuo maka ego ezumike nka, iwu gbasara njikwa na ịkwụ ụgwọ ikike ezumike nka ndị na-enye ego ezumike nka yana usoro iji gbochie mmebi ego ezumike nka.
Achọrọ enyemaka na iwu ezumike?
Biko kpọtụrụ ndị na-akwụ ụgwọ ụgwọ ụgwọ ụgwọ anyị
> Ndokwa ezumike nka dịka usoro ogidi
> Nkwenye nke mmanye na iwu ego ezumike nka ụlọ ọrụ 2000
> Iwu ezumike nka
N'agbanyeghị eziokwu na iwu ezumike nka bụ mpaghara iwu nke ya, o nwekwara ọtụtụ ihu na mpaghara iwu ndị ọzọ. Ọ bụ ya mere, na ọnọdụ nke iwu ezumike nka, na mgbakwunye na iwu na ụkpụrụ akọwapụtara, iwu na usoro izugbe na ngalaba ọrụ ọrụ, dịka ọmụmaatụ, na-etinyekwa. Dịka ọmụmaatụ, ego ezumike nka bụ ọnọdụ ọrụ dị mkpa maka ọtụtụ ndị ọrụ, nke edobere ma tụlee na nkwekọrịta ọrụ. Ọnọdụ a na-ekpebi ego ị ga-enweta n'oge agadi. Na mgbakwunye na iwu ọrụ, enwere ike ịtụle usoro iwu ndị a:
• Iwu iwu;
• Iwu nkwekọrịta;
• Iwu ụtụ;
• Iwu mkpuchi;
• alizationha nha nha nke ikike ezumike nka ma ọ bụrụ na nkewa.
Iwu na ụkpụrụ dị iche iche nke na-agbakọta na iwu ezumike nka ma na-agbanwe n'ọnọdụ ụfọdụ na-eme ka iwu ezumike nka bụrụ mpaghara iwu zuru oke na nke zuru oke. Ọzọkwa, iwu ezumike nka anaghị eguzo ma na-enwe mgbanwe mgbe niile na mba na mba dị iche iche, yana nduzi nke ndị na-achịkwa ihe metụtara dịka De Nederlandsche Bank (DNB) na Netherlands Authority for Financial Markets (AFM). Nke a pụtara na ịdozi okwu n'okwu gbasara ụgwọ ezumike nka chọrọ ọ bụghị naanị nghọta, kamakwa ihe ọmụma banyere ọrụ ahụ na nso nso a ma ọ bụ ihe amamihe dị na ya itinye onye ọka iwu ma ọ bụrụ na ị kpọtụrụ iwu ezumike nka. Law & MoreNdị ọka iwu abụghị naanị na-aga n'ihu n'ọhịa iwu ezumike nka, kamakwa gbasara mpaghara iwu ndị ọzọ ekwuru. You nwere ajụjụ ọ bụla gbasara iwu ezumike nka? Law & More nwere obi ụtọ inyere gị aka. I nwekwara ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara ikike ndị ọzọ na weebụsaịtị anyị.
Ndokwa ezumike nka dịka usoro ogidi
Ndokwa ezumike nka nke na-enye ego ngbanwe maka ndị ọrụ mgbe ezumike nka a na-akpọkwa ego ezumike nka. Na Netherlands, usoro ndozi ezumike nka, ma ọ bụ usoro ezumike nka, nwere ogidi atọ:
Ego ezumike nka A na-akpọkwa ego ezumike nka dị ka ndokwa OW. Onye ọ bụla nọ na Netherlands nwere ikike maka ndokwa dị otú ahụ. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ ọnọdụ etinye na nke a. Ọnọdụ mbụ maka ịnata AOW-ndokwa bụ na afọ ụfọdụ, ya bụ afọ 67, ga-enwerịrị. Ọnọdụ nke ọzọ bụ na mmadụ ga-arụ ọrụ ma ọ bụ bi na Netherlands mgbe niile. Maka afọ ọ bụla mmadụ bi na Netherlands site na 15th ruo afọ 67, 2% nke ihe kachasị AOW-enweta. Agaghị achọ akụkọ banyere ọrụ na nke a.
Ikike ezumike nka. Ogidi a gbasara ikike mmadụ nwetara n'oge ọ na-arụ ọrụ ma na-etinyekwa ego ezumike nka dị ka ụgwọ ezumike nka bụ isi. Karịsịa, mmeju a metụtara ụgwọ a na-akwụ ụgwọ nke ndị were ọrụ na onye ọrụ na-akwụ ụgwọ yana ụgwọ nke ego. A na-ewulite ụgwọ ezumike ntụkwasị obi oge niile n'ime mmekọrịta onye ọrụ na onye were gị n'ọrụ, nke mere na n'ọnọdụ a, achọrọ akụkọ gbasara ọrụ. Na Netherlands, enweghị iwu iwu zuru oke maka onye were gị n'ọrụ iwulite ego ezumike (mgbakwunye) maka ndị ọrụ ha. Nke a pụtara na a ga-eme nkwekọrịta n'etiti onye ọrụ na onye were gị n'ọrụ na nke a. Law & More ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka na nke a.
Pgwọ Ọrụ Afọ Ofufo Ogidi a metụtara ihe niile ndị mmadụ mere tupu ha emewe agadi. Ihe atụ gụnyere annuities, mkpuchi ndụ na ego sitere na nhatanha. Ọ kachasị ndị ọrụ onwe ha na ndị ọchụnta ego nwere ịdabere na ogidi a maka ego ezumike nka ha.
Nkwenye nke mmanye na iwu ego ezumike nka ụlọ ọrụ 2000
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ndị ọrụ na Netherlands anaghị akwụ ụgwọ maka ụgwọ ezumike (mgbakwunye) maka ndị ọrụ ha, n'ọnọdụ ụfọdụ, ha ka nwere ike ịhazi ụgwọ ezumike nka. Dịka ọmụmaatụ, nke a bụ ikpe ma ọ bụrụ na itinye aka na atụmatụ ezumike nka bụ iwu maka onye were gị n'ọrụ site na ego ego ezumike nka nke ụlọ ọrụ. Ọrụ a na-ebilite ma ọ bụrụ na ihe a na-akpọ iwu chọrọ chọrọ metụtara mpaghara ụfọdụ: nkọwa nke mịnịsta nke ngalaba ahụ kwadoro nke itinye mmanye na ụlọ ọrụ ezumike nka zuru oke. Ntinye aka na mmanye mmefu ego nke ụgwọ ọrụ nke 2000 na-achịkwa ohere nke atụmatụ ezumike nka a manyere ndị ọrụ niile n'otu ụlọ ọrụ ma ọ bụ ngalaba.
Ọ bụrụ na ikere òkè na ego ezumike nka niile nke ụlọ ọrụ dị mkpa, ndị were ọrụ n'ọrụ na ngalaba dị mkpa ga-edebanye aha na ego ezumike nka ụlọ ọrụ ahụ N'ikpeazụ, ego ahụ na-arịọ maka ozi gbasara ndị ọrụ a ga-enye ha na ndị were ha n'ọrụ na-anata ụgwọ maka ụgwọ ezumike nka ha ga-akwụ. Ọ bụrụ na ndị na-ewe mmadụ n'ọrụ enweghị mmekọ na ụdị ego ezumike nka ụlọ ọrụ a, n'agbanyeghị na enwere iwu ịme ya, ha ga-anọ n'ọnọdụ ọghọm. A sị ka e kwuwe, na nke ahụ enwere ohere na ụgwọ ezumike nka nke ụlọ ọrụ ka ga-akwụ ụgwọ ego zuru oke maka afọ niile ịlaghachi azụ. Na Law & More anyị ghọtara na nke a nwere oke nsonaazụ maka ndị were ọrụ. Ya mere Law & MoreNdị ọkachamara dị njikere inyere gị aka izere ụdị ọghọm a.
Isi okwu nke iwu ezumike nka bụ Iwu ezumike nka. Iwu ezumike nka gụnyere iwu ndị:
• Gbochie mbata ikike ezumike nka
• Inye ikike n'ihe gbasara inyefe uru na ọnọdụ nke onye were gị n'ọrụ;
• Depụta ikere ndị ọrụ n'ihe metụtara amụma nke onye na-enye ego ezumike nka;
• Chọrọ ọkachamara opekempe banyere nka ndị ọrụ otu ndị ọrụ ezumike nka;
• Dezie ụzọ a ga-esi enweta ego ezumike nka;
• Depụta iwu opekempe nke onye ọrụ ezumike nka.
Otu n'ime iwu ndị ọzọ dị mkpa na Iwu ezumike nka gbasara ọnọdụ nke, ọ bụrụ na emechaa, nkwekọrịta ezumike nka n'etiti onye were gị n'ọrụ na onye ọrụ ga-ezute. N’ebe a, edemede nke 23 nke Iwu ezumike nka kwuru na a ga-etinye nkwekọrịta ezumike nka n’ime ego ezumike nka ma ọ bụ onye na-akwụ ụgwọ ezumike nka a maara. Ọ bụrụ na onye were gị n'ọrụ anaghị eme nke a, ma ọ bụ opekata mpe, ọ na-etinye ihe egwu nke ọrụ onye were gị n'ọrụ, nke onye ọrụ ahụ nwere ike ịmalite site na iwu iwu nke nkwekọrịta nkwekọrịta. Na mgbakwunye, nnabata na iwu na ụkpụrụ na ọnọdụ nke ego ezumike nka, dịka ekwuru ya, ndị DNB na AFM na-enyocha ya, yabụ na usoro ndị ọzọ kwadoro mmebi iwu.
At Law & More anyị ghọtara na a bịa n'ihe banyere iwu ezumike nka, ọ bụghị naanị iwu na ụkpụrụ dị iche iche dị mgbagwoju anya, kamakwa ọdịmma dị iche na mmekọrịta iwu dị mgbagwoju anya metụtara. Ya mere Law & More na-eji usoro nkeonwe. Ọkachamara ọkachamara anyị n'ọhịa iwu ezumike nka na-emikpu onwe gị ma nwee ike inyocha ọnọdụ gị na ohere ị nwere. Dabere na nyocha a, Law & More nwere ike ịdụ gị ọdụ na usoro ndị ọzọ dị mma. Ọzọkwa, ndị ọkachamara anyị nwere obi ụtọ inye gị ndụmọdụ na enyemaka n'oge usoro iwu nwere ike. You nwere ajụjụ gbasara ọrụ anyị ma ọ bụ iwu ezumike nka? Mgbe ahụ kpọtụrụ Law & More.